Kuyini isampula igolide
a okunjalo metal yizicukuthwane efana negolide akuvamile ungena isandla womuntu njengoba injalo emsulwa. Ngokuvamile kuleyo mikhiqizo esiwabiza ngokuthi igolide empeleni i ingxubevange zegolide ligatures. Ligature ngokuthi yizicukuthwane non-ayoni metal amanyela. Lezi ukungcola kunezelwa ingxubevange, asetshenziswa ukuthuthukisa ukusebenza kanye nezinye izimfanelo ezidingekayo njengoba ngokwayo ensimbini eyigugu uthambile kakhulu njengoba injalo emsulwa. Igolide injalo emsulwa echayeke nemihuzuko esindayo, futhi imikhiqizo ezingavumelani ke kungenziwa, uzobe kalula emibi futhi ngokuvamile aphule.
Ngisho nasezikhathini zasendulo, ososayensi baye bathola ukuthi le ligature kangcono negolide nesiliva nethusi. Ngakho-ke, kwanezelwa Alloys igolide e amanani ahlukahlukene. Futhi ukuze bakwazi ukwazi inani ligatures kungezwe Alloys ngokwenza ubucwebe, baqala ukusebenzisa amasampula zegolide. Okungukuthi, ezweni lanamuhla, izinga noma yimuphi ubucwebe kanye imihlobiso kumkhiqizo ensimbini eyigugu akuxhomekile kulokho (abomvu noma amhlophe) igolide esetshenziselwa ukukhiqizwa yayo, futhi kusukela kokuqukethwe okuphothula zabo, obanika amandla nokuqina kwayo.
Eziningi zalezi imigexo zakhiwe 585 igolide. Okunye ukwaziswa womshini imigexo ukuhlukanisa igolide obomvu, ophuzi nomhlophe. Igolide Red ikhiqizwa ngokungeza nalokho lethusi lona kwandisa amandla futhi ihlala isikhathi eside. Kepha ligatures ophuzi ngokuvamile esetshenziswa esiliva, futhi ukuthola ezimhlophe ukungezwa ingxubevange nickel kanye palladium. Ngokomlando esetshenziswa izinhlelo ezimbili ukucacisa isampula igolide - a Carat ne-metric. Ensimini ka eRussia ngokuyinhloko asetshenziswa ohlelweni imethrikhi, esekelwe ukuzimisela isisindo ensimbini eyigugu e thousandths imikhiqizo mass. Ngakho-ke kulula ukuyiqonda yiziphi amasampula egolide. Ngokwesibonelo, 1000 amagremu 585 ingxubevange iqukethe 585 amagremu wegolide elihlanzekile 415 amagremu ligatures. Ngokufanayo, isampuli kunqunywa, negolide emhlophe.
Carat igolide isampula ukuthola Uhlelo ikakhulu isicelo e-UK, i-Europe USA. Kulokhu, isiqu wenziwa carats. Carat kuchazwa njengoba omunye amabili nane Isisindo segolide e ingxubevange. Ngakho-ke okumsulwa ensimbini eyigugu has 24k, isampuli 750 oluhambisana 18k, isampula 375 has 9k. Ethandwa kakhulu emhlabeni isebenzisa ingxubevange igolide 750 ukuhlolwa. Cishe noma yimuphi umbala Igolide izinto zenziwa nge ukusetshenziswa kwalesi igolide isampula. Umehluko ngombala imigexo sifinyelele usebenzisa yokuthi indlela yokwakheka Alloys zingezwa ngezinto ezihlukahlukene eziyigugu - palladium, Iridium, steel, i-chromium ne-zinc.
Ngakho-ke, ubucwebe zanamuhla emakethe khona omkhulu wegolide okwesibhakabhaka, igolide eliluhlaza, igolide, igolide abamnyama, kanye gold white. Nokho, ezivame kakhulu okwamanje aphuzi futhi inhlanganisela yalokhu igolide ophuzi nomhlophe. Kodwa ekuphileni kwansuku zonke ngokuvamile atholakala Alloys amasampuli ezine: 375, 585, 750 kanye 958. Igolide ingxubevange amasampula 958 ngokuvamile isetshenziselwa ukwenziwa zobuciko. Kukhona 900 isampula, okuyinto emazweni amaningi ngenxa minting segolide zemali kanye amazinyo. Uma imihlobiso zenziwa kusukela Alloys amasampuli esingaphansi 375, ke basuke ayisekho kubhekwa ukuba ubucwebe, zabizwa ubucwebe.
Emazweni amaningi emhlabeni ekukhiqizeni isimo imigexo ukuphatha okuqukethwe egolide Alloys. Kwezinye izifundazwe ngisho babe ngaphezulu ukulawula Jewelers corporations ukuthi babe inhlamba yabo ziyinkimbinkimbi kakhulu futhi ahlukahlukene. Nokho, kwamanye amazwe, njenge-Egypt, Turkey, iMelika amazwe aseNingizimu Melika, akukho ukulawula kukahulumeni phezu womshini imikhiqizo igolide.
Igolide namacici amadayimane (eMoscow Jewelry Plant)
Tiara Modern - i umhlobiso okukhethekile, uqokomisa ubuhle futhi isimo umnikazi walo
Namacici nge pearl omnyama nomhlophe: incazelo, izithombe, izibuyekezo
Art ukuba amahle: indlela ukugqoka indandatho esandleni sayo
5 izindlela ukuhlukanisa idayimane inkohliso
Rover "P.": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nokubuyekeza
Kuyini ukubaluleka igama Amir ngokwako igcwele?
Usuku le-St Patrick: 15 yezandla bendabuko Irish ziyojabula wonke umndeni wakho
Kungani u-Oleg Lesiprofetho ngokuthi? Prince Oleg Veschy: Biography
Indlela amanzi okugqumisa iklabishi. izindlela eziningana
Ezidingekayo Iningi imiyalo ssh
I umsindo emotweni. Uyini umsindo engcono emotweni
Izici iziqu grade 9 yokwamukelwa: isampula izici